नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३५ हजार मानिसको मृत्यु ! « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३५ हजार मानिसको मृत्यु !
विराटनगर, २६ फागुन । वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३५ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।
छ प्रकारको रोग भएका बिरामीको सहुलियतमा उपचार गरेर औषधिसमेत निःशुल्क उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।